အလှအပကို ဖျက်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလည်း'''''''' - SANTHITSA
မိန်းမသားများအတွက် အလှအပကို ဖျက်ဆီးမဲ့ အရာတွေဟာ အမှူမဲ့အမှတ်မဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုမောင်းထုတ်မလည်း ဘယ်လို ကာကွယ်မလည်း လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အလှအပနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ချို့ကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ခြေဖနောင့်မှာ အက်ကွဲပြီး ကြည့်ရဆိုးဆိုး နေထိုင်ရ ခက်ခက်တွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အခမ်းအနားတွေ တက်တဲ့ အခါပဲ ဖြစ်စေ လူအများနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်မှာ အရှက်ရစေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ဘယ်လို ကာကွယ်ဖြေရှင်းမလည်း သင့်မျက်နှာပြင်မှာ လိမ်းနေတဲ့အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို ပဲ သင့်ခြေထောက်မှာ အသုံးပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ ခြေထောက်ကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောသုတ်သင်ပြီး ဂလစ်စရင်း ပါဝင်တဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို လိမ်းပြီးနောက် ခြေအိတ်စွပ်၍ အိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ခြေသလုံးမွှေးတွေကို မကြာခဏ ရိတ်နေတာကြောင့် အမွှေးကြမ်းတွေ ပိုထွက်လာလို့ စိတ်ပျက်နေပါသလား ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးပြီး ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။ ခြေသလုံးမွှေးတွေကို အနည်းငယ် ရှည်လာရုံမျှနဲ့ မရိတ်ပါနဲ့ တစ်လက်မရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံစာလောက် ထားပြီးမှ အမွှေးချွတ်ဖယောင်း လိမ်းကာချွတ်ပေးပါ အနည်းငယ် နာကျင်မှူရှိမည်။ အရေပြားနဲ့ ဓာတ် မတည့်ပါက ယားယံမှူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ အမွှေးချွတ် ဖယောင်းကို လိမ်းတဲ့ အခါမှာတော့ မနည်းမများနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အတိုင်းအတာ ဖြစ်နေပါစေ။
သင့်အရေပြားတွေရဲ့ အပေါ်ယံ အရေပြားဟာ ခြောက်သွေ့ကာ ကွာကျ လာတာကြောင့် နီရဲပီးပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ဒီလို ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ်တွေဟာ နာကျင်တာနဲ့ အရေပြား ကွာကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ် အရေပြား ကွာကျတာမျိုးကတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ပျက်စီးနေတဲ့ အရေပြားတွေကို ဖယ်ရှားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြား ပျက်စီးမှူ မဖြစ်စေဖို့ အနည်းဆုံး SPF 30 ပါဝင်တဲ့ နေရောင်ကာ ခရင်မ်ကို အိမ်အပြင် မထွက်ခင် နာရီဝက်ကြို လိမ်းထားပါ။
ဘယ်သို့ပင်ဖြစ်စေ မျက်နှာပြင်ဟာ အစိုဓာတ်ရှိရမယ်လို့ ဆိုသော်လည်း ကြည့်မကောင်း မြင်မကောင်းအောင် အဆီပြန်နေခြင်းမျိုးကတော့ နေရထိုင်ရ ခက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ မျက်နှာကို မကြာခဏ ကြေးချွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့ မကြာခဏ ကြေးချွတ်ခြင်းဟာ အရေပြားမှ အဆီများကိုပိုမို ထုတ်ပေးတာကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကြေးသန့်စင်အား ပျော့တဲ့ သန့်စင်ပစ္စည်းကိုသာ သုံးပါ။အဆီမပါဝင်တဲ့ အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ်ကို သုံးပါ ရေဓာတ်ကို အခြေခံပြုလုပ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကိုသာသုံးပါ။
သင့်မှာ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ပြီး မွဲညစ်ညစ်ဖြစ်ကာ အစိုဓာတ် နည်းနေပါသလား ခြောက်သွေ့မှူကြောင့် အသားအရေတွေ ကြမ်းနေပြီလား
ဒါဆိုမပူပါနဲ့ ဒီနည်းလေးတွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ….
သင့်အနေနဲ့ ရေပူနဲ့ရေချိုးခြင်း ရေကိုအချိန်ကြာကြာ ချိုးခြင်းကြေးချွတ်အားပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာတွေသုံးခြင်းတို့ကြောင့် အရေပြားစွတ်စိုမှူ ကိုထိန်းပေးတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာပဲ ဖစ်ပါတယ်။ ရေပူမဟုတ်ပဲ ရေနွေးနွေးကို ချိုးလို့ရပါတယ်။ အရေပြားကို ကြမ်းတမ်းစွာ ပွတ်တိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ ယူရီးယား ဒါမှမဟုတ် လက်တစ်အက်ဆစ် ပါဝင်တဲ့ အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ်ကို လိမ်းပေးပါ။
မျက်နှာမှာ အနီစက်လေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပြီလား စိတ်သိပ်မပူပါနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးသာ ကြည့်လိုက်ပါ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ မျက်နှာမှာ အနီစက်လေးတွေ ဖြစ်ပေါ်တာဟာ နှင်းခူရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလိုဓာတ်မတည့်တဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနီစက်ပျောက်တွေကို ဖုံးအုပ်ဖို့ကတော့ ကွန်ဆယ်လာ ခပ်ပါးပါး လိမ်းပြီး ဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ် အရှည်သဖြင့် မဖြစ်လာစေရန်ကတော့ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
သင့်မျက်နှာပြင်ဟာ လှချင်ပါရဲ့နဲ့ တင်းတိတ်တို့ ထွက်နေတာကြောင့် အလှပျက်နေလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ တင်းတိတ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အိမ်အပြင်မထွက်ခင် နေရောင်ကာ ခရင်မ်လိမ်းပေးပါ။ ကွန်ဆယ်လာနဲ့ ဖုန်းအုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကြည်လင်ဝင်းပဖို့ ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တဲ့ ခရင်မ်လိမ်းပါ၊တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တင်းတိတ်တွေအရောင်ဖျော့ကာ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
အလှအပဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းတွေမို့ လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်လိုက်ပါ……
အလှအပကို ဖကျြတဲ့အရာတှကေို ဘယျလိုတှနျးလှနျမလညျး””””
မိနျးမသားမြားအတှကျ အလှအပကို ဖကျြဆီးမဲ့ အရာတှဟော အမှူမဲ့အမှတျမဲ့ ဝငျရောကျလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဝငျရောကျလာတဲ့အခါ ဘယျလိုမောငျးထုတျမလညျး ဘယျလို ကာကှယျမလညျး လူတိုငျးလိုလို ကွုံတှနေို့ငျတဲ့ အလှအပနဲ့ သကျဆိုငျရာ ပွဿနာတဈခြို့ကို အလှယျတကူ ဖွရှေငျးနိုငျမဲ့ နညျးလမျးလေးတှကေို သိထားသငျ့ပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ခွဖေနောငျ့မှာ အကျကှဲပွီး ကွညျ့ရဆိုးဆိုး နထေိုငျရ ခကျခကျတှေ ဖွဈနမေယျဆိုရငျ အခမျးအနားတှေ တကျတဲ့ အခါပဲ ဖွဈစေ လူအမြားနဲ့ တှဆေုံ့ ဆကျဆံရတာပဲဖွဈဖွဈ သငျ့မှာ အရှကျရစမှော ဖွဈတယျ။ ဒါကို ဘယျလို ကာကှယျဖွရှေငျးမလညျး သငျ့မကျြနှာပွငျမှာ လိမျးနတေဲ့အစိုဓာတျထိနျး ခရငျမျကို ပဲ သငျ့ခွထေောကျမှာ အသုံးပွုပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ညအိပျယာဝငျတဲ့အခါ ခွထေောကျကို သနျ့စငျအောငျ ဆေးကွောသုတျသငျပွီး ဂလဈစရငျး ပါဝငျတဲ့ အစိုဓာတျထိနျး ခရငျမျကို လိမျးပွီးနောကျ ခွအေိတျစှပျ၍ အိပျပါ။
သငျ့ရဲ့ခွသေလုံးမှေးတှကေို မကွာခဏ ရိတျနတောကွောငျ့ အမှေးကွမျးတှေ ပိုထှကျလာလို့ စိတျပကျြနပေါသလား ။ ဒီနညျးလမျးလေးကို သုံးပွီး ဖွရှေငျးကွညျ့ပါ။ ခွသေလုံးမှေးတှကေို အနညျးငယျ ရှညျလာရုံမြှနဲ့ မရိတျပါနဲ့ တဈလကျမရဲ့ လေးပုံ တဈပုံစာလောကျ ထားပွီးမှ အမှေးခြှတျဖယောငျး လိမျးကာခြှတျပေးပါ အနညျးငယျ နာကငျြမှူရှိမညျ။ အရပွေားနဲ့ ဓာတျ မတညျ့ပါက ယားယံမှူ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။ အမှေးခြှတျ ဖယောငျးကို လိမျးတဲ့ အခါမှာတော့ မနညျးမမြားနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ အတိုငျးအတာ ဖွဈနပေါစေ။
သငျ့အရပွေားတှရေဲ့ အပျေါယံ အရပွေားဟာ ခွောကျသှကေ့ာ ကှာကြ လာတာကွောငျ့ နီရဲပီးပူစပျပူလောငျ ဖွဈနတေယျ ဆိုရငျ ဒီလို ဖွရှေငျးလိုကျပါ။ ရှားစောငျးလကျပတျနဲ့ ဖျောစပျထုတျလုပျထားတဲ့ အစိုဓာတျ ထိနျးခရငျမျတှဟော နာကငျြတာနဲ့ အရပွေား ကှာကတြာကို သကျသာစပေါတယျ။ ရကျအနညျးငယျ အရပွေား ကှာကတြာမြိုးကတော့ ခန်ဓာကိုယျက ပကျြစီးနတေဲ့ အရပွေားတှကေို ဖယျရှားတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အရပွေား ပကျြစီးမှူ မဖွဈစဖေို့ အနညျးဆုံး SPF 30 ပါဝငျတဲ့ နရေောငျကာ ခရငျမျကို အိမျအပွငျ မထှကျခငျ နာရီဝကျကွို လိမျးထားပါ။
ဘယျသို့ပငျဖွဈစေ မကျြနှာပွငျဟာ အစိုဓာတျရှိရမယျလို့ ဆိုသျောလညျး ကွညျ့မကောငျး မွငျမကောငျးအောငျ အဆီပွနျနခွေငျးမြိုးကတော့ နရေထိုငျရ ခကျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ မကျြနှာကို မကွာခဏ ကွေးခြှတျခွငျး မပွုလုပျပါနဲ့ မကွာခဏ ကွေးခြှတျခွငျးဟာ အရပွေားမှ အဆီမြားကိုပိုမို ထုတျပေးတာကွောငျ့ အဆငျမပွပေါ။ မကျြနှာသဈတဲ့အခါ ကွေးသနျ့စငျအား ပြော့တဲ့ သနျ့စငျပစ်စညျးကိုသာ သုံးပါ။အဆီမပါဝငျတဲ့ အစိုဓာတျ ထိနျးခရငျမျကို သုံးပါ ရဓောတျကို အခွခေံပွုလုပျထားတဲ့ မိတျကပျတှကေိုသာသုံးပါ။
သငျ့မှာ အသားအရေ ခွောကျသှပွေီ့း မှဲညဈညဈဖွဈကာ အစိုဓာတျ နညျးနပေါသလား ခွောကျသှမေှူ့ကွောငျ့ အသားအရတှေေ ကွမျးနပွေီလား
ဒါဆိုမပူပါနဲ့ ဒီနညျးလေးတှကေို အသုံးပွုကွညျ့ပါ….
သငျ့အနနေဲ့ ရပေူနဲ့ရခြေိုးခွငျး ရကေိုအခြိနျကွာကွာ ခြိုးခွငျးကွေးခြှတျအားပွငျးတဲ့ ဆပျပွာတှသေုံးခွငျးတို့ကွောငျ့ အရပွေားစှတျစိုမှူ ကိုထိနျးပေးတဲ့ အဆီတှကေို ဖယျရှားပွဈနိုငျတာပဲ ဖဈပါတယျ။ ရပေူမဟုတျပဲ ရနှေေးနှေးကို ခြိုးလို့ရပါတယျ။ အရပွေားကို ကွမျးတမျးစှာ ပှတျတိုကျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့ ရခြေိုးပွီးတဲ့အခါ ယူရီးယား ဒါမှမဟုတျ လကျတဈအကျဆဈ ပါဝငျတဲ့ အစိုဓာတျ ထိနျးခရငျမျကို လိမျးပေးပါ။
မကျြနှာမှာ အနီစကျလေးတှေ ရှိနတောကွောငျ့ စိတျညဈနရေပွီလား စိတျသိပျမပူပါနဲ့ ဖွရှေငျးနညျးလေးသာ ကွညျ့လိုကျပါ ဆယျကြျောသကျအရှယျတှေ မကျြနှာမှာ အနီစကျလေးတှေ ဖွဈပျေါတာဟာ နှငျးခူရှိတာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျသလိုဓာတျမတညျ့တဲ့ အလှပွငျပစ်စညျးမြားကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အနီစကျပြောကျတှကေို ဖုံးအုပျဖို့ကတော့ ကှနျဆယျလာ ခပျပါးပါး လိမျးပွီး ဖုံးအုပျနိုငျပါတယျ အရှညျသဖွငျ့ မဖွဈလာစရေနျကတော့ အရပွေားဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။
သငျ့မကျြနှာပွငျဟာ လှခငျြပါရဲ့နဲ့ တငျးတိတျတို့ ထှကျနတောကွောငျ့ အလှပကျြနလေို့စိတျမညဈပါနဲ့ တငျးတိတျကာကှယျဖို့အတှကျ အိမျအပွငျမထှကျခငျ နရေောငျကာ ခရငျမျလိမျးပေးပါ။ ကှနျဆယျလာနဲ့ ဖုနျးအုပျပေးပါ။ မကျြနှာကွညျလငျဝငျးပဖို့ ဗီတာမငျစီ ပါဝငျတဲ့ ခရငျမျလိမျးပါ၊တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ တငျးတိတျတှအေရောငျဖြော့ကာ သကျသာလာပါလိမျ့မယျ။
အလှအပဆိုငျရာ ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးဖို့အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးတှမေို့ လိုကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့လိုကျပါ……